डाचाराजको रहस्यमय मृत्यु- दुर्घटना नियोजित कि भवितब्य ? - Dainik Online Dainik Online
डाचाराजको रहस्यमय मृत्यु- दुर्घटना नियोजित कि भवितब्य ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य एवम् सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज डाचाराज वाग्ले गत माघ २१ गते साँझ राँके जुलुसमा सहभागी भएका थिए । संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको पार्टीको नेताका हिसावले उनले सर्लाहीको बरहथवा क्षेत्रमा राँके जुलुसको नेतृत्व गरेका थिए ।
राँके जुलुस सकिएपछि उनी घर जान भनेर हिँडे । राजनीतिक व्यक्तित्वका हिसावले परिवारमा उनको एउटा छवि थियो- घर छिट्टै पुग्छु भन्ने, तर बीचमै अरु काम आइलाग्दा ढिलो गरी मात्रै पुग्ने । त्यो दिन पनि परिवारका सदस्यलाई उनी ढिला गरेर नै पुग्छन् भन्ने लागेको थियो ।
तर, ९ बजेतिर परिवारका सदस्यलाई प्रहरीले फोन गरेर भन्यो, ‘वाग्ले सर दुर्घटनामा पर्नुभएको छ । तपाईंहरु आउनुपर्‍यो ।’ बरहथवादेखि उनको घर रहेको नयाँसडक बीचको जंगलमा उनी दुर्घटनामा परेका थिए ।
प्रहरीले एम्बुलेन्स बोलाएर उनलाई बरहथवा अस्पताल पनि पुर्‍याएको थियो । तर, अस्पताल पुर्‍याउनेवित्तिकै चिकित्सकले उनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरे ।
घटनास्थलको प्रकृति, वाग्लेको शरीरमा लागेको चोट र उनी सवार मोटरसाइकलको अवस्था हेर्दा घटना शंकास्पद थियो । घटना अस्वभाविक लाग्नुको पहिलो कारण थियो, उनी सामाजमा हुने बेथितिविरुद्ध खुलेर विरोध गर्थे । केही समय अगाडि मिटर ब्याजीविरुद्ध उनले अभियान नै चलाएका थिए । मिटर ब्याजी पीडितहरुको नेतृत्व गरेर न्यायका लागि उनी काठमाडौं पनि पुगेका थिए ।
अनि अर्को कारण थियो उनी सत्ताविरुद्ध आन्दोलनमा थिए । कतै कसैले राजनीतिक इवि साँध्नका लागि पो दुर्घटना गराएका थिए कि ? जसका कारण उनको मृत्यु हुनु पुग्यो ।
घटनाको दिनदेखि नै प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउन तथा घटनाको अन्य तथ्य केलाउन भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपाले केन्द्रीय सदस्य प्रह्लाद बुढाथोकीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गर्‍यो ।
बुढाथोकीको नेतृत्वमा फागुन १ गते गठन भएको समितिले फागुन २ गतेदेखि घटनास्थल पुगेर जाँचबुझ शुरु गरेको थियो । यसबीचमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी, ज्ञवालीका परिवार तथा आफन्त, उनीसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिसँग कुराकानी भएको छानबिन समितिका संयोजक बुढाथोकीले दैनिक अनलाइनलाई जानकारी दिए ।
तर, आफूहरु पनि घटनाको मुख्य कारण के हुनसक्छ भनेर निष्कर्षमा पुगिनसकेको बुढाथोकीले बताए । ‘प्रहरीले पनि अनुसन्धान टुंग्याइसकेको अवस्था छैन । प्रहरीको अनुसन्धान निष्पक्ष होस् र परिणाममुखी होस् भनेर हामी हाम्रो सीमामा रहेर घटनाबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ डाचाराज वाग्लेको मृत्युबारे छानबिन गर्न गठित नेकपाको समितिका संयोजक बुढाथोकीले दैनिक अनलाइनसँग भने ।
तर, घटनास्थल, घटनाको प्रकृति र दुर्घटनामा परेका मोटरसाइकलको अवस्था समेत हेर्दा कुनै सवारी साधनले ठक्कर दिएर दुर्घटना भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘मोटरसाइकलको ह्यान्डिल पुरै भाँचिएको छ । घटनास्थल र घटनाको प्रकृति हेर्दा कुनै साधनले ठक्कर दिएको जस्तो देखिन्छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘तर, कस्तो र कुन साधनले ठक्कर दियो होला भनेर अनुसन्धान गर्नका लागि हामी प्राविधिक ज्ञान प्राप्त विज्ञ त होइनौं । यसका लागि प्रहरीकै अनुसन्धानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।’
घटनास्थलको मुचुल्का शंकलन गरी शव पोस्टमार्टमा लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा स्रोतका अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि सोमबार (फागुन ३ गते) आइसकेको छ ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धान र पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेर्दा ज्ञवालीको मृत्यु दुर्घटनामै परेर भएको भन्ने देखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । दुर्घटना भवितव्य थियो कि नियोजित भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको र अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट भवितब्य नै देखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘यहाँका राजनीतिक दल र उहाँको परिवारका सदस्य र उहाँसँग निकट सम्बन्ध भएका केही व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी केही शंकास्पद व्यक्तिको सूची पनि तयार गरिएको थियो,’ ज्ञवाली मृत्यु घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दैनिक अनलाइनसँग भने, ‘शंकास्पद व्यक्तिको सूचीमा केही अवैध कारोबार गर्ने व्यापारी, दलका कार्यकर्ता र नेताहरु थिए । उनीहरुको कल डिटेल निकालेर अनुसन्धान गरियो । घटना पछिका उनीहरुका गतिविधिमाथि निगरानी पनि गरियो । तर, शंका गरेजस्तो केही ‘क्लु’ भेटिएको छैन ।’
२०४५ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका वाग्लेले शुरुमा विद्यार्थी राजनीति समेत गरेका थिए । २०४७ सालमा सर्लाही जिल्ला पार्टीको सदस्य भएका थिए ।
वाग्ले तत्कालीन एकता केन्द्र हुँदै माओवादी केन्द्रमा आएका थिए । तत्कालीन एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज भएका उनी एमाओवादी विभाजन हुँदा मोहन बैद्यको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा-माओवादीमा गएका थिए ।
पछि रामबहादुर थापा (बादल)सँग माओवादी केन्द्रमा फर्किएका वाग्ले एमालेसँगको पार्टी एकीकरण पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य र सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज बनेका थिए । दिवंगत वाग्लेका श्रीमती र दुई छोरा छन् ।